Tropico 6: yatove nezuva rekuburitsa zviri pamutemo | Linux Vakapindwa muropa
Tropico izano rakakurumbira uye zita rekufananidza reguta rako chairo. Iyo nyowani uye yakamirirwa kwenguva yakareba vhezheni Tropico 6 yatove nezuva rekuburitsa zviri pamutemo reLinux, Mac, uye Windows. Sezvo iwe uchinyatso kuziva, iri zita iro rakaunganidza vazhinji mafeni uyezve mibairo yekubudirira kwayo. Mushure mekuyedza kweLimbic Varaidzo ichakurumidza kuve nesu, asi ikozvino unogona kutotenga muzvitoro zvepamhepo chiutsi y Bhuku Rinozvininipisa.
Isu tadzidzawo ruzivo nezve Chinyorwa cheHove, kumwe kwekutanga kunotarisirwa, ndokuti, chitoro chemabhokisi ezvitoro cheTropico 6 chichavhurwa digitally pa March 29 yemapuratifomu matatu ataurwa pamusoro. Uye zvakare, iwe unogona kutenga yekutengesa yakarongedzwa musi waApril 2, mazuva mashoma gare gare. Uye zvechokwadi, sezvandambotaura, unogona kutowana pre-kutenga odha muzvitoro zvepamhepo zvandakataura mundima yapfuura (ine 10% dhisikaundi).
Kana iwe uri fan of Tropico, iwe uchakurumidza kukwanisa kunakirwa yazvino vhezheni iyo yakagadziridzwa kwechinguvana uye nekudaro uchikwanisa kuenderera nesaga yako semudzvanyiriri kana mudzvanyiriri wako guta rechitsuwa tropical iyo iwe uchafanirwa kukura, kuumba kune yako yaunofarira uye kuitisa kuitira kuti vagari vako vatongwe, asi zvirokwazvo mune digital nyika. Iwe unotoziva kuti isu takakurukura mune yakapfuura LxA chinyorwa dzese nhau dzawaizowana muTropico 6, muchokwadi, isu takasiya chinongedzo netrailer yemutambo.
Asi kana iwe uchida kuti isu tiwedzere zororo rako, unogona dzora ruzhinji pazvitsuwa zvakawandisa, maneja zvese kuvaka uye kupihwa humambo hwako hudiki, kuvaka mabhiriji uye zvivakwa semabhiriji izvozvi zvakare zvinogoneka Iwe unotoziva kuti iwe unayo yekushanya uye yekufambisa system inowanikwa (tekisi, mabhazi, tambo mota, ...). Iwe zvakare une kugona kugadzirisa dzimwe nzvimbo, gadzira zvimwe zvigadziriso kuburikidza neyekutsvagisa uye budiriro sisitimu, kupa sarudzo sarudzo,
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Tropico 6: yatove nezuva rekuburitsa zviri pamutemo